उपनिर्वाचन २०७६ : वाम तालमेल काँग्रेसलाई चुनौती !
सो चुनावमा काङ्ग्रेसका जीतबहादुर शेरचनलाई तीन हजार २ सय ६० मतले पछि पार्दै गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्ती विजयी भएका थिए । घर्तीले ११ हजार ८ सय ८४ मत पाउँदा शेरचनको मत आठ हजार ६ सय ६४ थियो । उपचुनावमा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को समर्थनमा राजमोका उम्मेदवार खिमविक्रम शाही चुनावी मैदानमा छन् । काङ्ग्रेसले अघिल्लो चुनावमा पराजित शेरचनलाई पुनः उम्मेदवार बनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा तत्कालीन नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राजमोको गठबन्धनले सबै क्षेत्रमा एकलौटी जितेको थियो ।
विसं २०७० को संविधानसभा सदस्यको दोस्रो चुनावमा जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र जितेको काङ्ग्रेस वाम तालमेलकै कारण पराजित भएको थियो ।
“पहिले वाम तालमेल गरेका हुनाले उपचुनावमा पनि बाध्यता पर्यो होला”, सभापति थापाले भने, “उनीहरुको एकता आत्मिय खालको छैन, एकतर्फी जस्तो छ ।”
काङ्ग्रेसका उम्मेदवार शेरचन अघिल्लो चुनावपछि जनतामाझ घुलमिल भएकाले चुनाव जित्नेमा विश्वस्त छन् । “गएको चुनावमा केही मतको अन्तरले हारेपनि जनताको काम र सेवा गर्न छोडिन”, उनले भने, “अहिले परिस्थिती फरक छ, हामी चुनाव जित्छौँ ।”
उनले पहिले चुनाव जितेका दल र उम्मदेवारले जनतामाझ गरेको वाचा पुरा गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए । पहिले चुनाव हारेका कारण आफूले सद्भावको मत पनि बटुल्ने शेरचनको भनाइ छ ।
राजमाका जिल्ला अध्यक्ष अमर थापा भने अघिल्लो चुनावमा भन्दा बढी मतका साथ चुनाव जितिनेमा ढुक्क छन् । उनले भने, “काङ्ग्रेसले जितिरहेको ठाउँ हो, जनमत पनि राम्रो थियो, सरकार पनि काङ्ग्रेसकै थियो” उनले भने, “त्यो परिस्थितिमा त काङ्ग्रेस ठूलो मतान्तर सहित चुनाव हार्यो, अहिले कसरी जित्छ ? जित्दैन ।”
तीनै तहमा बलियो कम्युनिष्ट सरकार भएको, जनतामा आशा जागेको, विकास, निर्माणदेखि राष्ट्रिय मुद्दामा दरिलो अडान लिएका कारण आफ्नो उम्मेदवारले झन् बढी मत लिएर जित्ने अध्यक्ष थापाको ठोकुवा छ । उनले उम्मेदवारीलाई लिएर छिटपुट असन्तुष्टि देखिए पनि त्यो समाधान हुने बताए।
शेरमान तत्कालीन नेकपा (माआवोदी केन्द्र) मा आउनुपूर्व राष्ट्रिय जनमोर्चामा आवद्ध थिए । गएको स्थानीय तह चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रबाट ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रमुख पदमा चुनाव लडेका थिए । नेकपाका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत बिहीबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनको उम्मेदवारी फिर्ता हुने बताएका थिए ।
राजमोका उम्मेदवार शाहीले वाम गठबन्धन नै आफ्नो जितको पहिलो आधार भएको बताए । “अहिलेको सरकार जनतामाझ लोकप्रिय हुँदै गएको छ, हाम्रो सङ्गठन पनि विस्तार भएको छ”, उनले भने, “सजिलै चुनाव जितिनेमा म ढुक्क छु ।” उनले चुनावी अभियानलाई पनि प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे ।
अव्यवहारिक र महत्वकाङ्क्षी योजना भन्दा पनि जनताका आधारभूत मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
राजमोका उम्मेदवार शाही पार्टीका जिल्ला सदस्य हुन्। निसीखोला गाउँपालिका–३ बोहोरागाउँका शाही शिक्षण पेशाबाट निवृत्त भएपछि राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्। उनी राजमोका पाका र विश्वासिला नेता मानिन्छन् ।
यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका शेरचन विद्यार्थीकाल देखि नै काङ्ग्रेसको राजनीतिमा आवद्ध छन्।
ढोरपाटन नगरपालिका–१ का शेरचन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट विसं २०६२ मा काठमाडौँस्थित ताहचल क्याम्पसको स्ववियु सभापति समेत भएका थिए।
काङ्ग्रेस जनमाझ शेरचन स्पष्ट वक्ता र विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। शेरचनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रोपटक उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको हो ।
राजमो, नेपाली काङ्ग्रेससहित आठ दल र दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारले उपचुनावका लागि मनोनयन दर्ता गरेका छन् । अन्य दलमा समाजवादी पार्टीबाट अशोककुमार विक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) बाट निमबहादुर भण्डारीले उम्मेदवारी दिएका छन्।
उपनिर्वाचनको तिथि नजकिँदा कास्कीमा प्रचारप्रसार तीव्र
पोखरा । कास्की क्षेत्र नं–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनको तिथि नजकिन थालेपछि चुनावी प्रचारप्रसारले तीव्रता लिएको छ। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित पार्नका लागि घरदैलो कार्यक्रम, कोणसभा र सडकमा पार्टीका झण्डा
उपनिर्वाचन २०७६ : स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने सरोकारवालाको प्रतिबद्धता
लहान । यही मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र निष्पक्ष बनाउने सिरहाका सरोकारवालाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–१२ मा यही मङ्सिर १४ गते हुने लागेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित
उपनिर्वाचन : चितवनमा प्रतिस्पर्धा नेकपा र काँग्रेसकै बीच
चितवन । यही मङ्सिर १४ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि जिल्लाका तीनवटा वडामा निर्वाचन हुँदैछ। भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा पाँच, खैरहनी नगरपालिका–४ र ५ मा चार/चारजना उम्मेदवार रहेका छन्। पाँच